HTC diamond pads Mpanamboatra sy mpamatsy | China HTC diamond pad Factory
Kiraro fikosoham-bary HTC miaraka amin'ny fizarana Bara roa
Ny kiraro fikosoham-bary diamondra roa sosona no lasa fitaovana fikosoham-bary malaza indrindra amin'ny fikosoham-bary. Satria izy ireo dia afaka mandrakotra ny tora-droa ambony indrindra amin'ny vidiny tena ambany. Ny kiraro fikosoham-bary HTC roa sosona dia azo ampiasaina maina sy mando, ny fatorany dia miovaova amin'ny malefaka ka hatramin'ny mafy.
HTC Arrow Segments Kiraro fikosoham-bary
Ny kiraro zana-tsipìka dia manana ampahany miaraka amin'ny sisiny maranitra ho an'ny fanosehana, fikosoham-bary ary fikosehana miaraka. Miaraka amin'ny diamondra matevina, izany dia mahatonga azy ireo ho mahery setra, ary mety amin'ny fanesorana lakaoly sy fanesorana haingana ireo sosona matevina. Ny fametrahana fizarana ihany koa dia mamela ny fiainana ambony indrindra.
Kiraro fikosoham-bary HTC misy fizarana roa hexagon
Ny kiraro fikosoham-bary HTC dia ampiasaina amin'ny gorodona simenitra HTC, azo ampiharina amin'ny simenitra lehibe, gorodona terrazzo mba hanesorana ny epoxy, ny coating ary ny lakaoly eo aminy. Fampisehoana tsara ary mora ampiasaina. Ny raikipohy tsara dia mahatonga ny faharetana, ny maranitra ary ny vidiny mirary.
Sampana diamondra roa zana-tsipìka HTC fitotoana elatra
Sampana diamondra roa zana-tsipìka, mahery setra amin'ny fitotoana gorodona vita amin'ny simenitra malefaka, antonony ary mafy. Azonao atao ihany koa ny manala ny epoxy coatings eny ambonin'ny. Karazana fatorana vy isan-karazany ho an'ny gorodona simenitra hamafin'ny samy hafa. Manome tolotra fanamboarana ihany koa izahay mba hanatanterahana ny fepetra manokana.
Bara roa HTC diamondra fitotoana takelaka
2 mahitsizoro diamondra fizarana, mahery setra fitotoana ny gorodona rehetra surfaces: simenitra, terrazzo, granita, marbra, etc.High fitotoana fahombiazana sy ny fiainana lava. Mety amin'ny fikosoham-bary haingana sy mahery setra ho an'ny simenitra sy ny vato. Misy grefy sy fatorana metaly samihafa azo atao.
Ny malaza indrindra HTC Ez Change Diamond Metal Bond Grinding Pads ho an'ny gorodona beton
Ity kiraro fikosoham-bary diamondra ity dia natao ho an'ny gorodona HTC, mety amin'ny fitotoana simenitra sy gorodona terrazzo, azo ampiasaina ihany koa amin'ny fanesorana epoxy manify, loko, lakaoly amin'ny tany. Grits 6#~300# dia misy.